Mpandavaka sy mpanototra • AoRaha
Mpandavaka sy mpanototra
Mahatsikaiky indraindray ny fanao eto amintsika eto. Mamono-mamelona, hoy ny fomba fiteny izay. Manoloana ny fanahiana tondra-drano noho ny faharefoan’ny fefiloha amin’iny vahilavan’ny reniranon’Ikopa iny mantsy, dia noraràna, hono, ny fanaovam-biriky etsy Anosizato. Tsy ny fandraràna no olana, fa ny fahaizana mitsirika sy miady amin’ireo sokajin’olona faritana ho loharano handrendrika ny renivohitra.
Moa misy maha samy hafa ny mpandavaka sy ny mpanototra tany ve? Kanefa dia jerem-potsiny, toy ny tany nahalavoana, tokoa ny fidongon’ny fanotofana amin’ireo lemaka manodidina sady tsy lavitry ny renivohitra. Iny manamorona ny lalam-pirenena voalohany mihazo an’i Fenoarivo iny. Ery amin’ny manamorona ny lalana Boulevard de Tokyo ery. Mbola ho raharaha ny hiandry antsika amin’ireto famoronan-dalana vaovao toy ilay “Rocade Est”, satria tsy takona afenina ny fisian’ny fanorenana sahady amin’ny ilany atsimo sy andrefan’ny lalan’ny Frankôfônia. Toy izany koa ny tahotra amin’ny ho fiovan’ny endriky ny andaniny roa amin’ny arabe migodanan’i Tsarasaotra. Raha tena finiavana marina ny hisoroka ny tondra-drano eto an-drenivohitra dia mila foanana ny mizana tsindrian’ila.
Aleo hopotsirina ihany koa fa tsy mila atao afa-bela ny havoretran’ny mponin’Iarivo, manoloana ny fanentsemana an’ireo tatatra sy lakandrano hivarinan’ny rano miala eto an-drenivohitra. Asa daholo izany! Toa rehefa mitatao ny loza vao mody miasa ireo sampandra-draharaha isan-tsokajiny natao hiantoka ny fisorohana sy ny fiarovana. Zava-dehibe ny fanomezana fahefana an’ireo lohan’ireo vondrom-bahoaka eny ifotony, manomboka eny amin’ny fokontany sy ny kaominina.
Moa ve dia tokony hanana atahorana isika raha manana sefo fokontany sy ben’ny tanàna tsy mikoso-maso mena? Aoka tsy ho mpiray tsikombakomba amin’ny mpandavaka sy ny mpanototra ary ny mpanentsina !
Ady amin’ny lefakozatra :: Hametrahana mpanao vaksiny eny amin’ny fiantsonan’ny taksibe sy ny toerana be olona